Dacwadaha khiyaanada kaalmada dhaqaale ee Försäkringskassan oo kordhay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dacwadaha khiyaanada kaalmada dhaqaale ee Försäkringskassan oo kordhay
"Su'aalo kontorool baan shaqo siiyaha weydiinaa"
La daabacay måndag 25 januari 2016 kl 12.52
Tirada dacwado ay hey’adda caymiska dadweynaha Försäkringskassan u gudbisay boliska ayaa sannadkii hadda dhamaaday kor u kacday 2 300 marka loo barbardhigo sannadkii ka sii horeeyey. Taas oo ah kor u kac u dhigma boqolkii 71.
Laakiin kor u kaca dacwadaha micnaheeda ma ahan in khiyaanada ay badatay, balse waxay ahaan kartaa in hey’adda ku waanagsanaatay fashilidda khiyaanooyinka kaalmada dhaqaalaha, sidaas waxaa yeri Thomas Falk oo ah madaxa waaxda kontoroolka hey’adda Försäkringskassan:
- Marba marka ka sii denbeysa arrimahan waan ku sii wanaagsanaaneynaa. Shaqaalaha aad u tabobaran oo kontorool ayaan heysanaa. Waxaana hirgelinay nidaam qaabeysan oo aan khiyaanooyinka ku ogaan karno, ayu yeri.
Waxaa lagu qiyaasaa khiyanooyinka kaalmooyinka dhaqaale in ay dowladda uga baxdo dhaqaale kor u dhaafaya hal milyard sannadkii. Kaalmooyinka dhaqaale ee la khiyaameeyo ayaa ahaan kara kaalmada caruurta barnbidrag, caymiska jirrada, kaalmada assistans iyo underhållstöd, laakiin midda aad loo khiyaano ayaa ah mid la yiraahdo Föräldrapenningen ama loogu waco vap.
Hey’adda caymiska dadweynaha Försäkringskassan sannadkii waxaa soo gaara warbaxino ah 7 000-8 000 oo dadweynaha ka soo gaara kuna saabsan tuhuno khiyaano kaalmooyinka dhaqale ee hey’adda baxiso. Försäkringskassan ayaa ka gaabsatay in sheegto dhabaha ay u marto fashilitaanka khiyaanooyinka kaalmada. Laakiin hey’adda waxay sheegtay in aysan banaanada xogta ka baadi goobin:
-May, dabogal banaanada ah na looma ogala, laakiin shaqo siiyaha ruuxa ayaan su’aalo dabogal ah weydiinaa, ayuu yeri Thomas Falka, madaxa waaxda dabogalka ee Försäkringskassan.